Ny Holy See sy ny eveka Venezoeliana dia miara-miasa manampy ny mponina
Home » Vaovao momba ny dia an-kolontsaina » Ny Holy See sy ny eveka Venezoeliana dia miara-miasa manampy ny mponina
Ny Holy See sy ny Evekan'ny firenena dia manohy ny fiaraha-miasa amin'ny fanampiana ny vahoaka Venezoeliana
Ny alakamisy lasa teo dia nanao fianianana i Nicolás Maduro tamin'ny fotoam-piasana filoham-pirenena faharoa. Ny talen'ny vonjimaikan'ny biraon'ny asa fanaovan-gazety ao Vatican, Alessandro Gisotti, nanontanian'ny fampahalalam-baovao momba ny fisian'izany tamin'ny lanonana iray tamin'ny solontenan'ny Holy See, dia nampatsiahy ny tanjon'ny asa ara-diplaomatikan'ny Fijoroana Apôstôly.
"Ny Holy See dia mitazona fifandraisana diplomatika amin'ny fanjakana Venezoeliana, hoy ny navalin'i Gisotti. Ny hetsika ara-diplaomatika dia mikendry ny hampiroborobo ny soa iraisana, miaro ny fandriam-pahalemana ary manome antoka ny fanajana ny hasin'ny zanak'olombelona.
Noho io antony io dia nanapa-kevitra ny hisolo tena ny Holy See amin'ny lanonam-panokafana ny filoha, avy amin'ny Chargé d'Affaires of the Apostolic Nunciature of Caracas.
Ny Holy See sy ny Evekan'ny firenena dia manohy miara-miasa amin'ny fanampiana ny vahoaka Venezoeliana izay mijaly noho ny fiatraikany amin'ny maha-olona sy ny fiarahamonina noho ny toe-java-misy atrehin'ity firenena ity.
Tsy nisy filoha amerikana latina teo aloha nanana kaonty tao amin'ny IOR
Mikasika ny vaovao navoakan'ny Kolombiana, El Expediente, ao amin'ny IOR (Institute for the Works of Religion), mamaly ny fanontanian'ireo mpanao gazety momba ny fisian'ny kaonty IOR natolotry ny filoha sy ny filoha teo aloha tany Amerika Latina, Dr. Gisotti, nandà ny vaovao navoakan'ny lahatsoratr'i El Expediente.
Manana ny zony handray andraikitra ara-dalàna ny IOR “Rehefa nohamarinina tamin'ny manampahefana mahefa - dia nilaza tamin'ny mpanao gazety Alessandro Gisotti - azoko lazaina fa tsy nisy na iray aza tamin'ireo olona voalaza tao amin'ny lahatsoratra de El Expediente nanana kaonty tamin'ny IOR, na koa na izany aza, ary tsy nanolotra kaonty an'ny antoko fahatelo, na koa hanana - mifototra amin'ny lalàna vaovao noraisin'ny Ivotoerana - misy lohateny hanokatra ny toerana misy azy. Diso ireo antontan-taratasy izay naseho ho porofo. Manana ny zony handray andraikitra ara-dalàna ny IOR. ”
Filoham-pirenena Expedia ho mpitarika ny orinasa amin'ny taona
Rami Malek, mpandresy Golden Globe: mpankafy hotely iza?